မော်တော်ယာဉ်များနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းများကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ????(Zawgyi-Unicode) - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ထိုကမ္ဘာလူသားများအပါအ၀င် သက်ရှိ များအားလုံးသည် ဤကမ္ဘာမြေတွင် အသက်ရှင် နေထိုင်ကြသည်။ ဒီကမ္ဘာ ကြီးသည် ကျွန်ုပ်တို့သက်ရှိအားလုံး၏ မှီခိုအားထားရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဖြစ် သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဟု ဆိုရာတွင် လေထု၊ မြေထု၊ ရေထု၊ သစ်တော သစ်ပင်များနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေ များအားလုံး ပါဝင်ပြီး သက်ရှိများ အားလုံး အသက်ရှင်သန် ရပ်တည် ရေးအတွက် ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြီးသည် သဘာဝတရားက ပေးအပ်သော လက် ဆောင်ဖြစ်သည်။
ဤပတ်ဝန်းကျင် ကြီးပျက်စီးသွားလျှင် (သို့မဟုတ်) လုံးဝဥဿုံ ညစ်ညမ်းသွားလျှင် မှီခို အားထား၍နေကြသော သက်ရှိများ အားလုံးသည် အသက်ရှင်သန် ရပ် တည်ရေးအတွက် အလွန်ခက်ခဲသွား ပါမည်။
လူသားတို့၏ စဉ်းစားဆင်ခြင် မှုကင်းမဲ့သော လုပ်ရပ်များကြောင့် ဤကမ္ဘာမြေသည် ပျက်စီးမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးညစ်ညမ်းမှု များကြောင့် ကမ္ဘာ့ ရာသီဥတုများ ကြီးမားစွာပြောင်းလဲ ဖောက်ပြန်နေသည်။
ကမ္ဘာကြီးပိုမို ပူနွေးလာခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်း လဲမှုဖြစ်စဉ်ကြီး၏ ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုကို မျက်မှောက်ကာလတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၌ ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြ ရသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ် ညမ်းပျက်စီးစေသော အကြောင်း တရားများနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် များ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရခြင်းများ သည် ဆက်စပ်နေသော ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်သည်။
♾စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ် ငန်းများ တိုးတက်များပြားလာခြင်း၊ တွင်းထွက်လောင်စာ စွမ်းအင်များ အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ မော် တော်ယာဉ်မျိုးစုံ၊ လေယာဉ်၊ သဘောင်္၊ ရထားများနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော အီမစ်ရှင်းဓာတ်ငွေ့များ၊ ကျောက်မီး သွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော မီးခိုးများကြောင့် မြို့ကြီးပြကြီးများ၏ လေထုအရည် အသွေးသည် လွန်စွာနိမ့်ကျလျက်ရှိ ပြီး လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်စေရုံသာမက ဂေဟ စနစ်ကြီးကိုပါ ထိခိုက်ပြောင်းလဲစေ သည်။
သတ္တု တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း များနှင့် သစ်တောများ အလွန်အကျွံ ခုတ်ယူ ထုတ်လုပ်နေခြင်းသည်လည်း လေထုညစ်ညမ်းမှု မြင့်တက်စေသော အကြောင်းတရားများ ဖြစ်သည်။
စက်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် သော်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးကို အာရုံစူးစိုက်မှု အားနည်းခဲ့ကြ ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပြဿနာ များကို ကြီးမားစွာ ရင်ဆိုင်နေကြရ သည်။ ထင်ရှားသော သာဓကတစ်ခု မှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဘေကျင်းမြို့၏ လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးဝါးစွာ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည်။ (၂၀၁၅) ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်း လောက်တွင် တရုတ်မြို့ကြီးများ၏ လေထုအရည်အသွေး ကျဆင်းမှုသည် အနီရောင်အဆင့် အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ် လောက်အောင်အထိ ပြင်းထန်စွာဖြစ် ပေါ်ခဲ့သည်။
အသက်ရှု၍ မရလောက် အောင်အထိ ဆိုးဝါးစွာနိမ့်ကျခဲ့သော တရုတ်မြို့ကြီးများ၏ လေထုအရည် အသွေး ကျဆင်းခြင်းသည် သမိုင်း မှတ်တမ်းဝင် စံချိန်ကျိုးခဲ့သည်။
ရုံး များ၊ စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ခဲ့ရ သည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှု မြင့်မား လွန်း၍ စက်ရုံများ ပိတ်သိမ်းရပ်နား စေသည်။
လေကြောင်းခရီးစဉ် ရာပေါင်းများစွာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။ မော်တော်ယာဉ် မောင်းနှင်မှုများကို ထက်ဝက်ခန့်လျှော့ချခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် လေထုအရည်အသွေး ကျ ဆင်းမှု အများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့၍ ရှေ့သို့ မြင်နိုင်စွမ်းအားမှာလည်း ဆိုးဝါးစွာ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
လေကောင်းလေသန့် အခမဲ့ ရှုရှိုက်ခွင့်ရသော အခွင့်အရေးသည် လူသားများအတွက် သဘာဝတရား က အမွေပေးထားသော လက်ဆောင် ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ဘေကျင်း မြို့တော်နေ ပြည်သူများအတွက် ထို အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးလိုက်ရသည်။ မြို့ပြလေထုညစ်ညမ်းလွန်း၍ လေ သန့်ဘူးများကို ၀ယ်ယူရှုရှိုက်ရသော အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ကြသည်။
စက္ကန့် နှင့်အမျှ အသက်ရှုသွင်းနေသော လူသားများအတွက် သဘာဝတရား ကြီးက အခမဲ့ (Free Air) လေများ ပေးထားသော်လည်း အသက်ရှု၍ မရ လောက်အောင် ညစ်ညမ်းသွား သည်မှာ ထိုဒေသရှိ လူများ၏မိုက်မဲ သော လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှု မရှိအောင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ မည်မျှအရေးကြီးသ နည်း။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မှီခိုအားထား၍ အသက်ရှင်ရပ်တည်ရ သော လူသားအားလုံးအတွက် အသက် တမျှ အရေးကြီးကြောင်းကို ယနေ့ တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်ရပ်များက ကျွန်ုပ်တို့ ကို သင်ခန်းစာများစွာ ပေးနေပါသည်။
♲ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတစ်ခုတည်း ကို ဦးစားပေးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးကို အလေးမထားခဲ့သော၊ ပေါ့လျော့ခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးမူဝါဒများနှင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းခဲ့သော ယနေ့ တရုတ်မြို့ပြပြည်သူများကို သဘာဝ တရားကြီးက ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ် များ ပြန်ခတ်နေပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံ ကဲ့သို့ ယနေ့အိန္ဒိယတွင်လည်း လေထု ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေရ ပါပြီ။
လူဦးရေ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာများ ကြီး ထွားလာသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် သန်းပေါင်းများစွာသော မော်တော် ယာဉ်များမှ နေ့စဉ် စွန့်ထုတ်ပစ်နေ သော ညစ်ညမ်းဓာတ်ငွေ့ အီမစ်ရှင်း များကြောင့် မြို့တော်နယူးဒေလီသည် လည်း တရုတ်ဘေကျင်းမြို့ကဲ့သို့ လေထုညစ်ညမ်းမှုပြဿနာများ စတင် ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကြီးနှစ်နိုင်ငံသည် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံနှင့် ထိဆက်လျက်ရှိသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ ကြီး များဖြစ်သည်။
ထိုနိုင်ငံကြီးများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာ၊ မြို့ပြလေထု အရည်အသွေးကျဆင်းသော ပြဿနာ များ၏ စိန်ခေါ်မှုများကိုသင်ခန်းစာယူ ၍ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို မဟာဗျူဟာကျ သော မူဝါဒများ၊ ရေရှည်စီမံချက်များ၊ လက်တွေ့ကျသော ဆောင်ရွက်မှုအစီ အမံများကို ရေးဆွဲချမှတ်ပြီး အားလုံး ပူးပေါင်းလက်တွဲ၍ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါပြီ။
ဖေဖော်ဝါရီ (၂၃) ရက်နေ့ ထုတ်ဝေသော မြန်မာ့အလင်း သတင်း စာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ လေထု ညစ်ညမ်းမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် အတွက် လေထုတိုင်းတာရေးစက်များ တပ်ဆင်၍ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာမှတ် တမ်းယူနေသော သတင်းတစ်ပုဒ်ပါ လာပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ မြို့တော်ရန်ကုန်၏ လေထုအရည် အသွေးအညွှန်းကိန်းများကို စောင့် ကြည့်လေ့လာတိုင်းတာ၍ လေထုညစ် ညမ်းမှုအခြေအနေကိန်းဂဏန်း Data များကို ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို မှတစ်ဆင့် တိုင်းတာရရှိသော လေထု အရည်အသွေး Data များအရ လေထု အရည်အသွေးကျဆင်းနေလျှင် လေ ထု ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော အခြေ အနေများကို လျော့ကျသွားအောင် စီမံဆောင်ရွက်မည်ဟု သိရပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သန့် ရှင်းရေးဌာန၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို ကြိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တိုင်း တာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဆင့်မှ သည် ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး၏ လေထု အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန် လာရေးကို လက်တွေ့ ထိရောက်အောင် မြင်အောင် အရေးယူဆောင်ရွက်ရာ တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ တစ်ခုတည်းအားဖြင့် မရနိုင်ပါ။
မော်တော်ယာဉ် စီးရေ အများဆုံးရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော်၏ မော်တော်ယာဉ် သိန်းဂဏန်းရှိသော အရေအတွက်မှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော အိတ်ဇော အီမစ်ရှင်းများ ထိန်းချုပ် ရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ လေထု ညစ်ညမ်းမှုထိခိုက်စေသော အကြောင်း များ ထိန်းချုပ်ရေး၊ ဓာတုဗေဒပစ္စည်း များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း များ ထိန်းချုပ်ရေးကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူ လူထုနှင့် သတင်းမီဒီယာများ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်မှသာ တိုးတက် အောင် မြင်နိုင်ပါမည်။
လေထုအရည်အသွေးခေါ် Air Quality ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ် ၀န်းကျင်ရှိ လေထုထဲတွင် ပါဝင်နေ သော အခြေအနေများကို ညွှန်းဆို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းသော အရည်အသွေးနှင့် ပြည့်စုံသောလေထု အဆင့်အတန်းမှာ သန့်ရှင်း လတ် ဆက်ခြင်း၊ ကြည်လင်ခြင်း၊ အနံ့ အသက်ကင်းစင်ခြင်းစသော ဂုဏ် အင်္ဂါများအပြင် မီးခိုးများ၊ ဖုန်မှုန့် များ၊ အမှုန်အမွှားများ၊ မီးခိုးမြူများ၊ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော မသန့် ရှင်းသော ဓာတ်ငွေ့များ၊ လေထုထဲ တွင် ပျံ့လွင့်နိုင်သော အဏုဇီဝပိုးမွှား များ လုံးဝကင်းစင်သော ဂုဏ်အင်္ဂါ များနှင့်လည်း ပြည့်စုံရပါမည်။
လေထုအရည်အသွေးကို ညစ် ညမ်းမှု တိုင်းတာသော Indicator အမျိုးမျိုးဖြင့် တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများ၊ အပင်များ၊ အခြားသက်ရှိသတ္တ၀ါများ အားလုံး နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ လိုက် လျောညီထွေရှိပြီး ထိန်းသိမ်းထားနိုင် ရန်အတွက် လေထုအရည်အသွေး သည် Good Air Quality အဆင့်တွင် ရှိနေရန်လိုအပ်ပါသည်။
လေထု အရည် အသွေးကျဆင်းစေသော၊ လေထုညစ် ညမ်းစေသော အကြောင်းတရားများ ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ ဥပဒေဖြင့် ထိန်းကျောင်းနိုင်သော အင်စတီကျူး ရှင်းများ ရှိရပါမည်။
မဖြစ်မနေ လိုက်နာမှုကို တွန်းအားပေးသော ဥပဒေ၊ စည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက် များနှင့် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးအရေး ယူဆောင်ရွက်မှုများ အားကောင်းရပါ မည်။
အဂတိတရားကင်းသော ထိန်း ကျောင်းမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်အရေးယူမှုများ ရှိမှသာ လူအများက လေးစားလိုက်နာ ၍ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်နိုင်ပါမည်။
မြို့ပြလေထုအရည်အသွေး နိမ့် ကျပြီး လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေသော အရင်းခံ အကြောင်းတရားများမှာ လေထုအတွင်းသို့နေ့စဉ်စွန့်ထုတ်ပစ် နေသော အမျိုးမျိုးသော ညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စေသောအရာများ (Pollutants) ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုညစ်ညမ်းစေ သောအရာများ (Pollutants) သည် ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှ စက်ရုံ၊ အလုပ် ရုံ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၊ ဓာတ် အားပေးစက်ရုံများ၊ မော်တော်ယာဉ် များ၊ စက်ယန္တရား ကြီးများ၊ သဘောင်္၊ ရထားနှင့် မော်တော်ယာဉ်များမှ ထုတ်ပစ်လိုက်သော အီမစ်ရှင်းဓာတ်ငွေ့ များနှင့် အမှုန်အမွှားများဖြစ်ကြသည်။
လေထု ညစ်ညမ်းစေသော အရာများတွင် ပါဝင်သောအရာများမှာ
- ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုက် (SO2)၊
- ဟိုက်ဒြိုကာဗွန် (HC)၊
- ခဲ (Lead)၊
- အငွေ့ပြန်လွယ်သော အော်ဂဲနစ်ဓာတ် ပေါင်းများ (Volatile Organic Compound, VOC) ၊
- အမှုန်အမွှား များ (PM, Particulate Matter)၊
- ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် ဓာတ်ငွေ့ (CO2) ၊
- ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် အဆိပ် ဓာတ်ငွေ့ (CO)၊
- နိုက်တြိုဂျင်အောက် ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့များ (NOX) ၊
- မီးခိုးဖြူ (Smog) များနှင့် ဖုန်မှုန့်များ (Dust) ဖြစ်ပါသည်။
လေထုညစ်ညမ်းမှု ဖြစ်စဉ်များ ကြောင့် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေ သည်သာမက ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ကိုပါ ပြောင်းလဲပျက်စီးစေပါသည်။
မသန့်ရှင်းသော လေများကို နေ့စဉ် ရှုသွင်းနေရခြင်းကြောင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောဂါများ၊ အဆုတ်ရောဂါ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ ရောဂါနှင့် နှလုံးရောဂါများကို ရရှိ ခံစားလာကြရသည်။
ထိခိုက်လွယ် သောအုပ်စုမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် ကလေးငယ်များဖြစ်ပြီး လေထု မသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ် ရောဂါ (Asthma)နှင့် အဆုတ် အအေးမိ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါများ ပိုမိုဖြစ်ပွားကြသည်။
လေထု ညစ်ညမ်းမှုများ ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းအပူချိန်မြင့် တက်လာပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု များကြီးမားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Global Warming ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ရေခဲတောင်များ အရည်ပျော်ကျမှု လျင်မြန်လာပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာ ပြင် (Sea Level) မြင့်တက်မှုနောက် ဆက်တွဲပြဿနာများ ရင်ဆိုင်လာရ မည်။ ပင်လယ်ရေအောက် နစ်မြုပ် သွားမည့် ကျွန်းနိုင်ငံငယ်ကလေးများ တွင် နေထိုင်ကြသူများ၏ အသက် ရှင်ရပ်တည်ရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေ သည်။
လေထု ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေ သော ဓာတ်ငွေ့များတွင် ဆာလဆာ ဒိုင်အောက်ဆိုက် (SO2) နှင့် နိုက်တြို ဂျင်အောက်ဆိုက် (NOX) များပါဝင်ပြီး ထိုဓာတ်ငွေ့များကြောင့် အက်ဆစ်မိုး များ ရွာကျစေသည်။ အက်ဆစ်မိုးများ သည် လူသားများနှင့် သက်ရှိများကို ထိခိုက်စေသည်။ ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းကို ပျက်စီး ဆုံးရှုံးစေသည်။
ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာ (Ozone Layer) ပေါက်ပြဲ ပျက်စီးစေသော အကြောင်းတရားသည် လေထုညစ် ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။
အိုဇုန်းလွှာ သည် နေရောင်ခြည်မှ ပြင်းထန်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV) များ ကမ္ဘာပေါ်သို့ မကျရောက်စေရန် ကာ ကွယ်ပေးထားသည်။
UV Ray များ သည်လူသားများ၏ အရေပြားရောဂါ များနှင့် မျက်စိရောဂါများကို ဖြစ်ပွား စေသည်။
လေထုအရည်အသွေး ကျဆင်း ခြင်း (သို့မဟုတ်) လေထုညစ်ညမ်း ခြင်းသည် သာမန်ပြည်သူတစ်ဦး အနေဖြင့်စဉ်းစားပါက ဘာများအရေး ကြီးနေလို့လဲ။
ဒီကိစ္စ ငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့ လဲ။ အမှိုက်ပုံကလေး မီးရှို့တာဘာများ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထိခိုက်သွားမှာ မို့လဲဟု ဆိုကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပတ် ၀န်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရန် လူသားတိုင်း တာဝန်ရှိသည်ဟု ပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးသော အမြင်မျိုးဖြင့်ကြည့်ပြီး ဝေဖန်သုံးသပ် ပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သည် နိုင်ငံသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိ သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး သည် အရေးကြီးသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ကိုဖျက်စီးစေသူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညစ် ညမ်းအောင် လုပ်သူသည် လူ့အဖွဲ့ အစည်း၏ ရန်သူဖြစ်သည်ဟု လူသား မျိုးနွယ်အားလုံး၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်စီးနေသူဖြစ်သည်ဟု ကျယ်ပြန့် စွာ စဉ်းစားတွေးခေါ်သင့်သည်။
လေထုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်ဝန်း ကျင်ပျက်စီးမှုတို့၏ ဆိုးကျိုးသက် ရောက်မှုမျိုးစုံကို ခံစားနေကြရသော တရုတ်နိုင်ငံသားများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ သားများကို လေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင် ပါ။
ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည် တဖြည်းဖြည်း ယိုယွင်းပျက်စီးသော ဆုတ်ယုတ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု အားနည်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုများ ညံ့ဖျင်းနေပါက မကြာမီ တရုတ်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့ သဘာဝတရားကြီး၏ ပြစ်ဒဏ်ခတ် ခြင်းကို ခံကြရပါမည်။
ဘေကျင်း မြို့တော်နေ ပြည်သူများကဲ့သို့ မျက်နှာဖုံးစည်းများ တပ်ဆင်သွားလာ ၍ လေကောင်းလေသန့် ဆင်းရဲလွန်း သော ဘေးဒုက္ခကြီးကို ရင်ဆိုင်ကြုံ တွေ့လာရပါမည်။
သဘာဝတရားက ပေးသော အခမဲ့လေ (Free Air) ကို ပင် ရှုရှိုက်ခွင့်မရဘဲ လေသန့်ဘူးများ ၀ယ်ယူ တင်သွင်းရသည်အထိ ဆိုးဝါး သော အခြေအနေများ ကြုံတွေ့လာရ ပါမည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့သည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်ရှိ ပြီဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်သော ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
စက်မှုဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံများတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ပိုမိုများပြားလာ ၍ လေထုသန့်ရှင်းရေး ဥပဒေများကို သက်ဆိုင်ရာ ပါလီမန်များက ပြဋ္ဌာန်း သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် သန့်ရှင်း သော လေထုအက်ဥပဒေ (Clean Air Act) ကို ကွန်ကရက်လွှတ်တော်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံများ တွင် မကြာမီ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာတော့မည့် မြန်မာ့နိုင်ငံတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့် လေထု အရည်အသွေး ကျဆင်းမှုကို ကာကွယ် တားဆီးနိုင်ရန် Clean Air Act ဥပဒေ ကဲ့သို့ လေထုသန့်ရှင်းရေး ဥပဒေတစ် ရပ် သတ်မှတ်ပြန်ဋ္ဌာန်းရန် လိုအပ် လျက်ရှိနေပါသည်။
မြို့ပြလေထုညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ် စေသော အဓိကအကြောင်းတရားများ မှာ မော်တော်ယာဉ်မျိုးစုံမှ စွန့်ထုတ်နေ သော အိတ်ဇောအီမစ်ရှင်း (Emissions) များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍစုံ တွင် အသုံးပြုနေသော ရထား၊ သဘောင်္၊ လေယာဉ်များနှင့် စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ စွန့်ထုတ်နေသော ညစ်ညမ်းဓာတ်ငွေ့ များ ဖြစ်ပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်များ၊ ထိန်း ကျောင်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ပိုမိုခေတ်မီ ပြည့်စုံသော မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ (၂၀၁၅) ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ၏ အခန်း (၂) ရည်ရွယ်ချက်၊
● ပုဒ်မ ၃ (င) ၌ မော်တော်ယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိ ခိုက်မှုများ၊ လျော့နည်းစေရေးဆောင် ရွက်ရန် ဟုပါရှိသည်။
ထို့ပြင် မော် တော်ယာဉ်ဥပဒေ အခန်း (၈) ဦးစီး ဌာန၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များ၊
● ပုဒ်မ (၄၄) ပုဒ်မခွဲ (ဎ) ၌ ယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် သော ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပညာပေးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ သုတေသနပြုခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ် လာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများတွင် အဓိကကျသော အရာမှာ မော်တော်ကားအင်ဂျင်များမှ စွန့်ထုတ်လိုက်သော အိတ်ဇော ဓာတ် ငွေ့အီမစ်ရှင်းများကြောင့် လေထု ညစ် ညမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် လေထုအရည် အသွေးကျဆင်းနှင့်အတူ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော လူ့ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန် ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် မော်တော်ယာဉ် မျိုးစုံ၏ Exhaust Emission များကို နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းအတိုင်း စစ်ဆေး၍ တင်းကျပ်စွာထိန်းကျောင်းရန် ဥပဒေ အရ တာဝန်အရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ် ပါသည်။
မြို့ပြလေထုညစ်ညမ်းမှု ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီ၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ နေပြည် တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တို့နှင့်အတူ ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပြည်သူလူထုနှင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင် များ အားလုံးကို အသိပညာပေး လှုံ့ ဆော်ရန် အစိုးရမဟုတ်သော NGO အဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ အနုပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းလက် တွဲပြီး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒ ဦးဆောင်မှု အရေးကြီး
မော်တော်ယာဉ်များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုများမှ မွန်းကျပ်၍ အသက်ရှုရန်ပင် ခက်ခဲနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများတွင် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ် သုံးစွဲရေး မူဝါဒများ မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနေပြီ နည်း။ ရေနံအခြေခံသော စက်သုံး လောင်စာဆီများ သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု မရှိသော၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်ကို ပိုမိုသုံးစွဲရန် မူဝါဒများ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးနေပြီဖြစ် ပါသည်။
လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဟိုက်ဒြိုဂျင် Fuel Cell ကားများ၊ Hybrid ကားများ ပိုမိုသုံးစွဲလာစေရန် မူဝါဒများချမှတ် ခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသော မော်တော် ယာဉ်နည်းပညာများဖြင့် ခေတ်လွန် ကားဟောင်းများကို ပြန်လည်ပြုပြင် စေခဲ့သည်။
Zero-Emission ကား များ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် Clean Air Action Plan ကိုရေးဆွဲပြီး ရေရှည်တည်မြဲသော ဖွံ့ဖြိုးရေးဆီသို့ ဦးတည်သွားနေကြပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်တော် ယာဉ်စီးရေထက် မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးရေက သန်းချီ၍ များပြားစွာ သုံးစွဲ နေကြပါသည်။ ဓာတ်ဆီလောင်စာသုံး ဆိုင်ကယ်များနေရာတွင် လျှပ်စစ် ဆိုင်ကယ်၊ လျှပ်စစ်စက်ဘီးသုံးစွဲမှု ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် မူဝါဒပိုင်းအရ တွန်းအားပေးရပါမည်။
လျှပ်စစ်ကား များ၊ Fuel Cell ကားများ သုံးစွဲမှု တိုးတက်လာရေးကို နိုင်ငံတော်အပိုင်း မှ ဦးဆောင်လျှင် မြို့ပြလေထုညစ် ညမ်းမှု လျှော့ချရေးတိုးတက်လာပါ မည်။
သို့မဟုတ်ဘဲ ရေနံလောင်စာဆီ သုံးကားများကိုသာ ဆက်လက်ပြီး သုံးနေလျှင် များမကြာမီ ရန်ကုန်မြို့၏ လေထုအရည်အသွေး အဆင့်အတန်း သည် တရုတ်၊ အိန္ဒိယမြို့ကြီးများ ကဲ့သို့ အသက်ရှု မွန်းကျပ်သည်အထိ ဖြစ်လာပါတော့မည်။
မျောတျောယာဉျမြားနှငျ့ လထေုညဈညမျးမှု ဆိုးကြိုးသကျရောကျခွငျးမြားကို ဘယျလိုထိနျးခြုပျမလဲ????(Zawgyi-Unicode)
လူသားမြားအပါအဝငျ သကျရှိမြားအားလုံးသညျ ဤကမ်ဘာမွတှေငျ အသကျရှငျ နထေိုငျကွသညျ။
ထိုကမ်ဘာလူသားမြားအပါအဝငျ သကျရှိ မြားအားလုံးသညျ ဤကမ်ဘာမွတှေငျ အသကျရှငျ နထေိုငျကွသညျ။ ဒီကမ်ဘာ ကွီးသညျ ကြှနျုပျတို့သကျရှိအားလုံး၏ မှီခိုအားထားရာ ပတျဝနျးကငျြကွီးဖွဈ သညျ။
ပတျဝနျးကငျြဟု ဆိုရာတှငျ လထေု၊ မွထေု၊ ရထေု၊ သဈတော သဈပငျမြားနှငျ့ ရာသီဥတုအခွအေနေ မြားအားလုံး ပါဝငျပွီး သကျရှိမြား အားလုံး အသကျရှငျသနျ ရပျတညျ ရေးအတှကျ ဒီပတျဝနျးကငျြကွီးသညျ သဘာဝတရားက ပေးအပျသော လကျ ဆောငျဖွဈသညျ။
ဤပတျဝနျးကငျြ ကွီးပကျြစီးသှားလြှငျ (သို့မဟုတျ) လုံးဝဥဿုံ ညဈညမျးသှားလြှငျ မှီခို အားထား၍နကွေသော သကျရှိမြား အားလုံးသညျ အသကျရှငျသနျ ရပျ တညျရေးအတှကျ အလှနျခကျခဲသှား ပါမညျ။
လူသားတို့၏ စဉျးစားဆငျခွငျ မှုကငျးမဲ့သော လုပျရပျမြားကွောငျ့ ဤကမ်ဘာမွသေညျ ပကျြစီးမှုမြားစှာ ဖွဈပျေါနသေညျ။
ပတျဝနျးကငျြ ပကျြစီးညဈညမျးမှု မြားကွောငျ့ ကမ်ဘာ့ ရာသီဥတုမြား ကွီးမားစှာပွောငျးလဲ ဖောကျပွနျနသေညျ။
ကမ်ဘာကွီးပိုမို ပူနှေးလာခွငျးနှငျ့ ရာသီဥတုပွောငျး လဲမှုဖွဈစဉျကွီး၏ ဆိုးကြိုးသကျ ရောကျမှုကို မကျြမှောကျကာလတှငျ ကမ်ဘာ့နိုငျငံမြား၌ ရငျဆိုငျခံစားနကွေ ရသညျ။
သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ညဈ ညမျးပကျြစီးစသေော အကွောငျး တရားမြားနှငျ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျ မြား ပိုမိုဖွဈပျေါခံစားနရေခွငျးမြား သညျ ဆကျစပျနသေော ဖွဈစဉျမြား ဖွဈသညျ။
♾စကျမှုကုနျထုတျလုပျရေး လုပျ ငနျးမြား တိုးတကျမြားပွားလာခွငျး၊ တှငျးထှကျလောငျစာ စှမျးအငျမြား အလှနျအကြှံ ထုတျယူသုံးစှဲခွငျး၊ မျော တျောယာဉျမြိုးစုံ၊ လယောဉျ၊ သဘောင်ျ၊ ရထားမြားနှငျ့ သယျယူပို့ဆောငျရေး လုပျငနျးမြားမှ စှနျ့ထုတျလိုကျသော အီမဈရှငျးဓာတျငှမြေ့ား၊ ကြောကျမီး သှေးသုံး ဓာတျအားပေးစကျရုံမြားမှ စှနျ့ထုတျလိုကျသော မီးခိုးမြားကွောငျ့ မွို့ကွီးပွကွီးမြား၏ လထေုအရညျ အသှေးသညျ လှနျစှာနိမျ့ကလြကျြရှိ ပွီး လူသားတို့၏ကနျြးမာရေးကို တိုကျရိုကျ ထိခိုကျစရေုံသာမက ဂဟေ စနဈကွီးကိုပါ ထိခိုကျပွောငျးလဲစေ သညျ။
သတ်တု တူးဖျောရေးလုပျငနျး မြားနှငျ့ သဈတောမြား အလှနျအကြှံ ခုတျယူ ထုတျလုပျနခွေငျးသညျလညျး လထေုညဈညမျးမှု မွငျ့တကျစသေော အကွောငျးတရားမြား ဖွဈသညျ။
စကျမှုဖှံ့ဖွိုးပွီး နိုငျငံမြားတှငျ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျ သျောလညျး ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျး ရေးကို အာရုံစူးစိုကျမှု အားနညျးခဲ့ကွ ၍ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုပွဿနာ မြားကို ကွီးမားစှာ ရငျဆိုငျနကွေရ သညျ။ ထငျရှားသော သာဓကတဈခု မှာ တရုတျနိုငျငံ ဘကေငျြးမွို့၏ လထေုညဈညမျးမှု ဆိုးဝါးစှာ ဖွဈပျေါ ခဲ့သညျ။ (၂၀၁၅) ခုနှဈ နှဈကုနျပိုငျး လောကျတှငျ တရုတျမွို့ကွီးမြား၏ လထေုအရညျအသှေး ကဆြငျးမှုသညျ အနီရောငျအဆငျ့ အမွငျ့ဆုံးသတျမှတျ လောကျအောငျအထိ ပွငျးထနျစှာဖွဈ ပျေါခဲ့သညျ။
အသကျရှု၍ မရလောကျ အောငျအထိ ဆိုးဝါးစှာနိမျ့ကခြဲ့သော တရုတျမွို့ကွီးမြား၏ လထေုအရညျ အသှေး ကဆြငျးခွငျးသညျ သမိုငျး မှတျတမျးဝငျ စံခြိနျကြိုးခဲ့သညျ။
ရုံး မြား၊ စာသငျကြောငျးမြား ပိတျခဲ့ရ သညျ။ လထေုညဈညမျးမှု မွငျ့မား လှနျး၍ စကျရုံမြား ပိတျသိမျးရပျနား စသေညျ။
လကွေောငျးခရီးစဉျ ရာပေါငျးမြားစှာ ဖကျြသိမျးခဲ့ရသညျ။ မျောတျောယာဉျ မောငျးနှငျမှုမြားကို ထကျဝကျခနျ့လြှော့ခခြဲ့ရသညျ။
ကမ်ဘာ ပျေါတှငျ လထေုအရညျအသှေး ကြ ဆငျးမှု အမြားဆုံးဖွဈပျေါခဲ့၍ ရှသေို့ မွငျနိုငျစှမျးအားမှာလညျး ဆိုးဝါးစှာ ကဆြငျးသှားခဲ့သညျ။
လကေောငျးလသေနျ့ အခမဲ့ ရှုရှိုကျခှငျ့ရသော အခှငျ့အရေးသညျ လူသားမြားအတှကျ သဘာဝတရား က အမှပေေးထားသော လကျဆောငျ ဖွဈသညျ။
သို့သျောလညျး ဘကေငျြး မွို့တျောနေ ပွညျသူမြားအတှကျ ထို အခှငျ့အရေးမြား ဆုံးရှုံးလိုကျရသညျ။ မွို့ပွလထေုညဈညမျးလှနျး၍ လေ သနျ့ဘူးမြားကို ၀ယျယူရှုရှိုကျရသော အခွအေနကေိုရောကျခဲ့ကွသညျ။
စက်ကနျ့ နှငျ့အမြှ အသကျရှုသှငျးနသေော လူသားမြားအတှကျ သဘာဝတရား ကွီးက အခမဲ့ (Free Air) လမြေား ပေးထားသျောလညျး အသကျရှု၍ မရ လောကျအောငျ ညဈညမျးသှား သညျမှာ ထိုဒသေရှိ လူမြား၏မိုကျမဲ သော လုပျရပျမြားကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ပတျဝနျးကငျြ ယိုယှငျးပကျြစီးမှု မရှိအောငျ ထိနျးသိမျးကာကှယျရေး လုပျငနျးမြား မညျမြှအရေးကွီးသ နညျး။
သဘာဝပတျဝနျးကငျြအပျေါ မှီခိုအားထား၍ အသကျရှငျရပျတညျရ သော လူသားအားလုံးအတှကျ အသကျ တမြှ အရေးကွီးကွောငျးကို ယနေ့ တရုတျနိုငျငံဖွဈရပျမြားက ကြှနျုပျတို့ ကို သငျခနျးစာမြားစှာ ပေးနပေါသညျ။
♲ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးတဈခုတညျး ကို ဦးစားပေးပွီး ပတျဝနျးကငျြထိနျး သိမျးရေးကို အလေးမထားခဲ့သော၊ ပေါ့လြော့ခဲ့သော ပတျဝနျးကငျြထိနျး သိမျးရေးမူဝါဒမြားနှငျ့ အရေးယူ ဆောငျရှကျမှု အားနညျးခဲ့သော ယနေ့ တရုတျမွို့ပွပွညျသူမြားကို သဘာဝ တရားကွီးက ကွီးလေးသောပွဈဒဏျ မြား ပွနျခတျနပေါပွီ။
တရုတျနိုငျငံ ကဲ့သို့ ယနအေိ့န်ဒိယတှငျလညျး လထေု ညဈညမျးမှု ပွဿနာမြား ရငျဆိုငျနရေ ပါပွီ။
လူဦးရေ ပေါကျကှဲခွငျးနှငျ့ အတူ ပတျဝနျးကငျြပွဿနာမြား ကွီး ထှားလာသညျ။
စကျမှုလုပျငနျးမြားနှငျ့ သနျးပေါငျးမြားစှာသော မျောတျော ယာဉျမြားမှ နစေ့ဉျ စှနျ့ထုတျပဈနေ သော ညဈညမျးဓာတျငှေ့ အီမဈရှငျး မြားကွောငျ့ မွို့တျောနယူးဒလေီသညျ လညျး တရုတျဘကေငျြးမွို့ကဲ့သို့ လထေုညဈညမျးမှုပွဿနာမြား စတငျ ရငျဆိုငျနရေပါပွီ။
တရုတျနိုငျငံနှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံ ကွီးနှဈနိုငျငံသညျ ကြှနျုပျတို့နိုငျငံနှငျ့ ထိဆကျလကျြရှိသော အိမျနီးခငျြးနိုငျငံ ကွီး မြားဖွဈသညျ။
ထိုနိုငျငံကွီးမြား၏ ပတျဝနျးကငျြပွဿနာ၊ မွို့ပွလထေု အရညျအသှေးကဆြငျးသော ပွဿနာ မြား၏ စိနျချေါမှုမြားကိုသငျခနျးစာယူ ၍ ကြှနျုပျတို့နိုငျငံ၏ ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးကို မဟာဗြူဟာကြ သော မူဝါဒမြား၊ ရရှေညျစီမံခကျြမြား၊ လကျတှကေ့သြော ဆောငျရှကျမှုအစီ အမံမြားကို ရေးဆှဲခမြှတျပွီး အားလုံး ပူးပေါငျးလကျတှဲ၍ ဆောငျရှကျရနျ လိုအပျနပေါပွီ။
ဖဖေျောဝါရီ (၂၃) ရကျနေ့ ထုတျဝသေော မွနျမာ့အလငျး သတငျး စာတှငျ ရနျကုနျမွို့တျော၏ လထေု ညဈညမျးမှု စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရနျ အတှကျ လထေုတိုငျးတာရေးစကျမြား တပျဆငျ၍ ကှငျးဆငျးတိုငျးတာမှတျ တမျးယူနသေော သတငျးတဈပုဒျပါ လာပါသညျ။
ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျ သာယာရေးကျောမတီ ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးနှငျ့ သနျ့ရှငျးရေးဌာနမှ မွို့တျောရနျကုနျ၏ လထေုအရညျ အသှေးအညှနျးကိနျးမြားကို စောငျ့ ကွညျ့လလေ့ာတိုငျးတာ၍ လထေုညဈ ညမျးမှုအခွအေနကေိနျးဂဏနျး Data မြားကို ထုတျပွနျနိုငျရနျဖွဈသညျ။
ထို မှတဈဆငျ့ တိုငျးတာရရှိသော လထေု အရညျအသှေး Data မြားအရ လထေု အရညျအသှေးကဆြငျးနလြှေငျ လေ ထု ညဈညမျးမှုဖွဈစသေော အခွေ အနမြေားကို လြော့ကသြှားအောငျ စီမံဆောငျရှကျမညျဟု သိရပါသညျ။
မညျသို့ပငျဖွဈစေ ရနျကုနျမွို့ တျော စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးနှငျ့ သနျ့ ရှငျးရေးဌာန၏ လုပျဆောငျခကျြမြား ကို ကွိုဆိုရမညျဖွဈပါသညျ။
တိုငျး တာစောငျ့ကွညျ့လလေ့ာရေးအဆငျ့မှ သညျ ရနျကုနျမွို့တျောကွီး၏ လထေု အရညျအသှေး တိုးတကျကောငျးမှနျ လာရေးကို လကျတှေ့ ထိရောကျအောငျ မွငျအောငျ အရေးယူဆောငျရှကျရာ တှငျ ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျသာယာ ရေးကျောမတီ တဈခုတညျးအားဖွငျ့ မရနိုငျပါ။
မျောတျောယာဉျ စီးရေ အမြားဆုံးရှိသော ရနျကုနျမွို့တျော၏ မျောတျောယာဉျ သိနျးဂဏနျးရှိသော အရအေတှကျမှ စှနျ့ထုတျလိုကျသော အိတျဇော အီမဈရှငျးမြား ထိနျးခြုပျ ရေး၊ စကျမှုလုပျငနျးမြားမှ လထေု ညဈညမျးမှုထိခိုကျစသေော အကွောငျး မြား ထိနျးခြုပျရေး၊ ဓာတုဗဒေပစ်စညျး မြားထုတျလုပျခွငျး၊ သိုလှောငျခွငျး မြား ထိနျးခြုပျရေးကို သကျဆိုငျရာ အစိုးရဌာနမြား၊ အဖှဲ့အစညျးမြား အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ပွညျသူ လူထုနှငျ့ သတငျးမီဒီယာမြား အားလုံး ပူးပေါငျးပါဝငျမှသာ တိုးတကျ အောငျ မွငျနိုငျပါမညျ။
လထေုအရညျအသှေးချေါ Air Quality ဆိုသညျမှာ ကြှနျုပျတို့ ပတျ ၀နျးကငျြရှိ လထေုထဲတှငျ ပါဝငျနေ သော အခွအေနမြေားကို ညှနျးဆို ခွငျးဖွဈပါသညျ။ ကောငျးသော အရညျအသှေးနှငျ့ ပွညျ့စုံသောလထေု အဆငျ့အတနျးမှာ သနျ့ရှငျး လတျ ဆကျခွငျး၊ ကွညျလငျခွငျး၊ အနံ့ အသကျကငျးစငျခွငျးစသော ဂုဏျ အင်ျဂါမြားအပွငျ မီးခိုးမြား၊ ဖုနျမှုနျ့ မြား၊ အမှုနျအမှားမြား၊ မီးခိုးမွူမြား၊ အဆိပျအတောကျဖွဈစသေော မသနျ့ ရှငျးသော ဓာတျငှမြေ့ား၊ လထေုထဲ တှငျ ပြံ့လှငျ့နိုငျသော အဏုဇီဝပိုးမှား မြား လုံးဝကငျးစငျသော ဂုဏျအင်ျဂါ မြားနှငျ့လညျး ပွညျ့စုံရပါမညျ။
လထေုအရညျအသှေးကို ညဈ ညမျးမှု တိုငျးတာသော Indicator အမြိုးမြိုးဖွငျ့ တိုငျးတာနိုငျပါသညျ။ ကမ်ဘာပျေါရှိ လူသားမြား၊ အပငျမြား၊ အခွားသကျရှိသတ်တဝါမြား အားလုံး နှငျ့ သဘာဝအရငျးအမွဈမြား လိုကျ လြောညီထှရှေိပွီး ထိနျးသိမျးထားနိုငျ ရနျအတှကျ လထေုအရညျအသှေး သညျ Good Air Quality အဆငျ့တှငျ ရှိနရေနျလိုအပျပါသညျ။
လထေု အရညျ အသှေးကဆြငျးစသေော၊ လထေုညဈ ညမျးစသေော အကွောငျးတရားမြား ကို ရှာဖှဖေျောထုတျ၍ ဥပဒဖွေငျ့ ထိနျးကြောငျးနိုငျသော အငျစတီကြူး ရှငျးမြား ရှိရပါမညျ။
မဖွဈမနေ လိုကျနာမှုကို တှနျးအားပေးသော ဥပဒေ၊ စညျးကမျး ကနျ့သတျခကျြ မြားနှငျ့ ကွီးကွပျစဈဆေးအရေး ယူဆောငျရှကျမှုမြား အားကောငျးရပါ မညျ။
အဂတိတရားကငျးသော ထိနျး ကြောငျးမှု၊ စီမံအုပျခြုပျအရေးယူမှုမြား ရှိမှသာ လူအမြားက လေးစားလိုကျနာ ၍ ပတျဝနျးကငျြ ပကျြစီးမှုမြားကို ကာကှယျနိုငျပါမညျ။
မွို့ပွလထေုအရညျအသှေး နိမျ့ ကပြွီး လထေုညဈညမျးမှု ဖွဈစသေော အရငျးခံ အကွောငျးတရားမြားမှာ လထေုအတှငျးသို့နစေ့ဉျစှနျ့ထုတျပဈ နသေော အမြိုးမြိုးသော ညဈညမျးမှု ဖွဈစသေောအရာမြား (Pollutants) ကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ထိုညဈညမျးစေ သောအရာမြား (Pollutants) သညျ ကြှနျုပျတို့ပတျဝနျးကငျြမှ စကျရုံ၊ အလုပျ ရုံ စကျမှုကုနျထုတျလုပျငနျးမြား၊ ဓာတျ အားပေးစကျရုံမြား၊ မျောတျောယာဉျ မြား၊ စကျယန်တရား ကွီးမြား၊ သဘောင်ျ၊ ရထားနှငျ့ မျောတျောယာဉျမြားမှ ထုတျပဈလိုကျသော အီမဈရှငျးဓာတျငှေ့ မြားနှငျ့ အမှုနျအမှားမြားဖွဈကွသညျ။
လထေု ညဈညမျးစသေော အရာမြားတှငျ ပါဝငျသောအရာမြားမှာ
- ဆာလဖာဒိုငျအောကျဆိုကျ (SO2)၊
- ဟိုကျဒွိုကာဗှနျ (HC)၊
- အငှပွေ့နျလှယျသော အျောဂဲနဈဓာတျ ပေါငျးမြား (Volatile Organic Compound, VOC) ၊
- အမှုနျအမှား မြား (PM, Particulate Matter)၊
- ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုကျ ဓာတျငှေ့ (CO2) ၊
- ကာဗှနျမိုနောကျဆိုကျ အဆိပျ ဓာတျငှေ့ (CO)၊
- နိုကျတွိုဂငျြအောကျ ဆိုကျဓာတျငှမြေ့ား (NOX) ၊
- မီးခိုးဖွူ (Smog) မြားနှငျ့ ဖုနျမှုနျ့မြား (Dust) ဖွဈပါသညျ။
လထေုညဈညမျးမှု ဖွဈစဉျမြား ကွောငျ့ ဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုမြားမှာ လူသားတို့၏ ကနျြးမာရေးထိခိုကျစေ သညျသာမက ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး ကိုပါ ပွောငျးလဲပကျြစီးစပေါသညျ။
မသနျ့ရှငျးသော လမြေားကို နစေ့ဉျ ရှုသှငျးနရေခွငျးကွောငျ့ အသကျရှုလမျးကွောငျး ရောဂါမြား၊ အဆုတျရောဂါ၊ အဆုတျကငျဆာ ရောဂါနှငျ့ နှလုံးရောဂါမြားကို ရရှိ ခံစားလာကွရသညျ။
ထိခိုကျလှယျ သောအုပျစုမှာ သကျကွီးရှယျအိုမြား နှငျ့ ကလေးငယျမြားဖွဈပွီး လထေု မသနျ့ရှငျးမှုကွောငျ့ ပနျးနာရငျကပျြ ရောဂါ (Asthma)နှငျ့ အဆုတျ အအေးမိ၊ အဆုတျရောငျရောဂါမြား ပိုမိုဖွဈပှားကွသညျ။
လထေု ညဈညမျးမှုမြား ကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝနျးအပူခြိနျမွငျ့ တကျလာပွီး ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှု မြားကွီးမားစှာ ဖွဈပျေါလာသညျ။ Global Warming ဖွဈစဉျကွောငျ့ ရခေဲတောငျမြား အရညျပြျောကမြှု လငျြမွနျလာပွီး ပငျလယျရမေကျြနှာ ပွငျ (Sea Level) မွငျ့တကျမှုနောကျ ဆကျတှဲပွဿနာမြား ရငျဆိုငျလာရ မညျ။ ပငျလယျရအေောကျ နဈမွုပျ သှားမညျ့ ကြှနျးနိုငျငံငယျကလေးမြား တှငျ နထေိုငျကွသူမြား၏ အသကျ ရှငျရပျတညျရေးကို ခွိမျးခွောကျနေ သညျ။
လထေု ညဈညမျးမှုဖွဈစေ သော ဓာတျငှမြေ့ားတှငျ ဆာလဆာ ဒိုငျအောကျဆိုကျ (SO2) နှငျ့ နိုကျတွို ဂငျြအောကျဆိုကျ (NOX) မြားပါဝငျပွီး ထိုဓာတျငှမြေ့ားကွောငျ့ အကျဆဈမိုး မြား ရှာကစြသေညျ။ အကျဆဈမိုးမြား သညျ လူသားမြားနှငျ့ သကျရှိမြားကို ထိခိုကျစသေညျ။ ကောကျပဲသီးနှံ စိုကျပြိုးထုတျလုပျခွငျးကို ပကျြစီး ဆုံးရှုံးစသေညျ။
ကမ်ဘာ့အိုဇုနျးလှာ (Ozone Layer) ပေါကျပွဲ ပကျြစီးစသေော အကွောငျးတရားသညျ လထေုညဈ ညမျးမှုကွောငျ့ဖွဈသညျ။
အိုဇုနျးလှာ သညျ နရေောငျခွညျမှ ပွငျးထနျသော ခရမျးလှနျရောငျခွညျ (UV) မြား ကမ်ဘာပျေါသို့ မကရြောကျစရေနျ ကာ ကှယျပေးထားသညျ။
UV Ray မြား သညျလူသားမြား၏ အရပွေားရောဂါ မြားနှငျ့ မကျြစိရောဂါမြားကို ဖွဈပှား စသေညျ။
လထေုအရညျအသှေး ကဆြငျး ခွငျး (သို့မဟုတျ) လထေုညဈညမျး ခွငျးသညျ သာမနျပွညျသူတဈဦး အနဖွေငျ့စဉျးစားပါက ဘာမြားအရေး ကွီးနလေို့လဲ။
ဒီကိစ်စ ငါနဲ့ဘာဆိုငျလို့ လဲ။ အမှိုကျပုံကလေး မီးရှို့တာဘာမြား ကွီးကွီးကယျြကယျြ ထိခိုကျသှားမှာ မို့လဲဟု ဆိုကွမညျဖွဈပါသညျ။
ပတျ ၀နျးကငျြကို ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျ ရနျ လူသားတိုငျး တာဝနျရှိသညျဟု ပတျဝနျးကငျြကို ခဈြမွတျနိုးသော အမွငျမြိုးဖွငျ့ကွညျ့ပွီး ဝဖေနျသုံးသပျ ပါက ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေး သညျ နိုငျငံသားတိုငျးတှငျ တာဝနျရှိ သညျ။
ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး သညျ အရေးကွီးသညျ။
ပတျဝနျးကငျြ ကိုဖကျြစီးစသေူ၊ ပတျဝနျးကငျြကိုညဈ ညမျးအောငျ လုပျသူသညျ လူ့အဖှဲ့ အစညျး၏ ရနျသူဖွဈသညျဟု လူသား မြိုးနှယျအားလုံး၏ အကြိုးစီးပှားကို ဖကျြစီးနသေူဖွဈသညျဟု ကယျြပွနျ့ စှာ စဉျးစားတှေးချေါသငျ့သညျ။
လထေုညဈညမျးမှုနှငျ့ ပတျဝနျး ကငျြပကျြစီးမှုတို့၏ ဆိုးကြိုးသကျ ရောကျမှုမြိုးစုံကို ခံစားနကွေရသော တရုတျနိုငျငံသားမြားနှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံ သားမြားကို လလေ့ာသုံးသပျဆငျခွငျ ပါ။
ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှုသညျ တဖွညျးဖွညျး ယိုယှငျးပကျြစီးသော ဆုတျယုတျမှုဖွဈစဉျတဈခုဖွဈသညျ။
ကြှနျုပျတို့လူ့အဖှဲ့အစညျးတှငျ လညျး ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးမှု အားနညျးပွီး ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျး ရေး စီမံခနျ့ခှဲမှုမြား ညံ့ဖငျြးနပေါက မကွာမီ တရုတျနိုငျငံသားမြားကဲ့သို့ သဘာဝတရားကွီး၏ ပွဈဒဏျခတျ ခွငျးကို ခံကွရပါမညျ။
ဘကေငျြး မွို့တျောနေ ပွညျသူမြားကဲ့သို့ မကျြနှာဖုံးစညျးမြား တပျဆငျသှားလာ ၍ လကေောငျးလသေနျ့ ဆငျးရဲလှနျး သော ဘေးဒုက်ခကွီးကို ရငျဆိုငျကွုံ တှလေ့ာရပါမညျ။
သဘာဝတရားက ပေးသော အခမဲ့လေ (Free Air) ကို ပငျ ရှုရှိုကျခှငျ့မရဘဲ လသေနျ့ဘူးမြား ၀ယျယူ တငျသှငျးရသညျအထိ ဆိုးဝါး သော အခွအေနမြေား ကွုံတှလေ့ာရ ပါမညျ။
ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး ဥပဒကေို ပွညျထောငျစုလှတျတျောက ပွဋ်ဌာနျးပေးခဲ့သညျမှာ နှဈနှဈကြျောရှိ ပွီဖွဈပါသညျ။ သို့သျောလညျး လထေုညဈညမျးမှုကို ထိရောကျစှာ ကာကှယျတားဆီးနိုငျသော ဥပဒေ တဈရပျကို လိုအပျလကျြရှိပါသညျ။
စကျမှုဖှံ့ဖွိုးသော နိုငျငံမြားတှငျ လထေုညဈညမျးမှုမြား ပိုမိုမြားပွားလာ ၍ လထေုသနျ့ရှငျးရေး ဥပဒမြေားကို သကျဆိုငျရာ ပါလီမနျမြားက ပွဋ်ဌာနျး သညျ။ အမရေိကနျနိုငျငံတှငျ သနျ့ရှငျး သော လထေုအကျဥပဒေ (Clean Air Act) ကို ကှနျကရကျလှတျတျောက ပွဋ်ဌာနျးခဲ့ပွီးဖွဈပါသညျ။
အာဆီယံဒသေတှငျး နိုငျငံမြား တှငျ မကွာမီ စီးပှားရေးဖှံ့ဖွိုးတိုး တကျလာတော့မညျ့ မွနျမာ့နိုငျငံတှငျ စကျမှုလုပျငနျးမြားကွောငျ့ လထေု အရညျအသှေး ကဆြငျးမှုကို ကာကှယျ တားဆီးနိုငျရနျ Clean Air Act ဥပဒေ ကဲ့သို့ လထေုသနျ့ရှငျးရေး ဥပဒတေဈ ရပျ သတျမှတျပွနျဋ်ဌာနျးရနျ လိုအပျ လကျြရှိနပေါသညျ။
မွို့ပွလထေုညဈညမျးမှုဖွဈပျေါ စသေော အဓိကအကွောငျးတရားမြား မှာ မျောတျောယာဉျမြိုးစုံမှ စှနျ့ထုတျနေ သော အိတျဇောအီမဈရှငျး (Emissions) မြား၊ သယျယူပို့ဆောငျရေးကဏ်ဍစုံ တှငျ အသုံးပွုနသေော ရထား၊ သဘောင်ျ၊ လယောဉျမြားနှငျ့ စကျမှုကုနျထုတျ လုပျငနျးမြား၊ စကျရုံ၊ အလုပျရုံမြားမှ စှနျ့ထုတျနသေော ညဈညမျးဓာတျငှေ့ မြား ဖွဈပါသညျ။
မျောတျောယာဉျမြား၊ ထိနျး ကြောငျးရေးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ပိုမိုခတျေမီ ပွညျ့စုံသော မျောတျောယာဉျဥပဒကေို ပွညျထောငျစုလှတျတျောမှ (၂၀၁၅) ခုနှဈ စကျတငျဘာလတှငျ ပွဋ်ဌာနျးခဲ့ ပါသညျ။
မျောတျောယာဉျဥပဒေ၏ အခနျး (၂) ရညျရှယျခကျြ၊
● ပုဒျမ ၃ (င) ၌ မျောတျောယာဉျကွောငျ့ဖွဈပျေါ လာသော သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိ ခိုကျမှုမြား၊ လြော့နညျးစရေေးဆောငျ ရှကျရနျ ဟုပါရှိသညျ။
ထို့ပွငျ မျော တျောယာဉျဥပဒေ အခနျး (၈) ဦးစီး ဌာန၏ လုပျပိုငျခှငျ့မြား၊
● ပုဒျမ (၄၄) ပုဒျမခှဲ (ဎ) ၌ ယာဉျကွောငျ့ဖွဈပျေါ သော ပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ပညာပေးလှုံ့ဆျောခွငျး၊ သုတသေနပွုခွငျး၊ သကျဆိုငျရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြား၊ အစိုးရမဟုတျသော အဖှဲ့အစညျးမြား နှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး ဟု ဖျောပွထားပါသညျ။
မျောတျောယာဉျကွောငျ့ဖွဈပျေါ လာသော သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျမှုမြားတှငျ အဓိကကသြော အရာမှာ မျောတျောကားအငျဂငျြမြားမှ စှနျ့ထုတျလိုကျသော အိတျဇော ဓာတျ ငှအေီ့မဈရှငျးမြားကွောငျ့ လထေု ညဈ ညမျးမှု ဖွဈပျေါခွငျးနှငျ့ လထေုအရညျ အသှေးကဆြငျးနှငျ့အတူ နောကျဆကျတှဲ ဖွဈပျေါလာသော လူ့ကနျြးမာရေး ထိခိုကျမှုမြား ဖွဈပါသညျ။
ကုနျးလမျးပို့ဆောငျရေးညှနျ ကွားမှုဦးစီးဌာနသညျ မျောတျောယာဉျ မြိုးစုံ၏ Exhaust Emission မြားကို နိုငျငံတကာ စံနှုနျးအတိုငျး စဈဆေး၍ တငျးကပျြစှာထိနျးကြောငျးရနျ ဥပဒေ အရ တာဝနျအရှိဆုံးအဖှဲ့အစညျးဖွဈ ပါသညျ။
မွို့ပွလထေုညဈညမျးမှု ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ ကာကှယျရေး အတှကျ ရနျကုနျမွို့တျောစညျပငျသာ ယာရေးကျောမတီ၊ မန်တလေးမွို့တျော စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ၊ နပွေညျ တျော စညျပငျသာယာရေးကျောမတီ၊ ပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဦးစီး ဌာန၊ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့တို့နှငျ့အတူ ထိရောကျစှာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ လိုအပျပါသညျ။
ပွညျသူလူထုနှငျ့ ယာဉျပိုငျရှငျ မြား အားလုံးကို အသိပညာပေး လှုံ့ ဆျောရနျ အစိုးရမဟုတျသော NGO အဖှဲ့အစညျးမြား၊ သတငျးမီဒီယာမြား၊ အနုပညာရှငျမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးလကျ တှဲပွီး ဆောငျရှကျရနျလိုအပျပါသညျ။
မဟာဗြူဟာနှငျ့ မူဝါဒ ဦးဆောငျမှု အရေးကွီး
မျောတျောယာဉျမြားကွောငျ့ လထေုညဈညမျးမှုမြားမှ မှနျးကပျြ၍ အသကျရှုရနျပငျ ခကျခဲနသေော ကြှနျုပျတို့၏ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားတှငျ မျောတျောယာဉျထုတျလုပျ သုံးစှဲရေး မူဝါဒမြား မညျကဲ့သို့ပွောငျးလဲနပွေီ နညျး။ ရနေံအခွခေံသော စကျသုံး လောငျစာဆီမြား သုံးစှဲမှုကိုလြှော့ခြ၍ ပတျဝနျးကငျြညဈညမျးမှု မရှိသော၊ သနျ့ရှငျးသောစှမျးအငျကို ပိုမိုသုံးစှဲရနျ မူဝါဒမြား ပွောငျးလဲကငျြ့သုံးနပွေီဖွဈ ပါသညျ။
လြှပျစဈကားမြား၊ ဟိုကျဒွိုဂငျြ Fuel Cell ကားမြား၊ Hybrid ကားမြား ပိုမိုသုံးစှဲလာစရေနျ မူဝါဒမြားခမြှတျ ခဲ့သညျ။
သနျ့ရှငျးသော မျောတျော ယာဉျနညျးပညာမြားဖွငျ့ ခတျေလှနျ ကားဟောငျးမြားကို ပွနျလညျပွုပွငျ စခေဲ့သညျ။
Zero-Emission ကား မြား ဖွဈပျေါလာစရေေးအတှကျ Clean Air Action Plan ကိုရေးဆှဲပွီး ရရှေညျတညျမွဲသော ဖှံ့ဖွိုးရေးဆီသို့ ဦးတညျသှားနကွေပါပွီ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ မျောတျော ယာဉျစီးရထေကျ မျောတျောဆိုငျကယျ စီးရကေ သနျးခြီ၍ မြားပွားစှာ သုံးစှဲ နကွေပါသညျ။ ဓာတျဆီလောငျစာသုံး ဆိုငျကယျမြားနရောတှငျ လြှပျစဈ ဆိုငျကယျ၊ လြှပျစဈစကျဘီးသုံးစှဲမှု ပိုမိုတိုးတကျလာစရေနျ မူဝါဒပိုငျးအရ တှနျးအားပေးရပါမညျ။
လြှပျစဈကား မြား၊ Fuel Cell ကားမြား သုံးစှဲမှု တိုးတကျလာရေးကို နိုငျငံတျောအပိုငျး မှ ဦးဆောငျလြှငျ မွို့ပွလထေုညဈ ညမျးမှု လြှော့ခရြေးတိုးတကျလာပါ မညျ။
သို့မဟုတျဘဲ ရနေံလောငျစာဆီ သုံးကားမြားကိုသာ ဆကျလကျပွီး သုံးနလြှေငျ မြားမကွာမီ ရနျကုနျမွို့၏ လထေုအရညျအသှေး အဆငျ့အတနျး သညျ တရုတျ၊ အိန်ဒိယမွို့ကွီးမြား ကဲ့သို့ အသကျရှု မှနျးကပျြသညျအထိ ဖွဈလာပါတော့မညျ။